Google debunks ewu ewu myths banyere Glass - News Ọchịchị
Google debunks ewu ewu myths banyere Glass
Google Glass OOB Ahụmahụ 27126 (Photo Ebe E Si Nweta: na tedeyt)
Kwadokwara ọkpụkpọ òkù EZIOKWU Eyewear Google Glass e megbuo, ma ọ bụ otú ya ndị na-emepụta na-eche, na ileba anya itule Google ka debunked na “Top Iri Echiche Ụgha” gbasara ya.
Echiche Ụgha 1 – Glass bụ kacha ndọpụ uche si ata ụwa. Dị ka Google, “Glass bụ oyi site na ndabara na na na mgbe ị chọrọ ka ọ bụrụ.” Yabụ, ọ bụ naanị na mgbe ọ bụ na ya mere ọ na-agaghị ịdọpụ uche gị, ma ọ bụrụ na ọ na-eme.
Echiche Ụgha 2 – Glass bụ mgbe niile na na na ndekọ ihe nile. Google si, “Glass na-adịghị mere maka ma ọ bụ ọbụna ike mgbe niile-on ndekọ (batrị agaghị adịru ogologo oge karịa 45 nkeji tupu ọ chọrọ ka a ebubo).” Ọ ka ga-adị mma ma ọ bụrụ na e nwere a red ìhè nke ruru on ma ọ bụ ihe ọ bụ ezie na, ọ bụghị ya?
Echiche Ụgha 3 – Glass nchọpụta bụ technology-efe geeks. Google si ya nchọpụta, ma ọ bụ beta testers, -agụnye “nne na nna, firefighters, zookeepers, brewmasters, film ụmụ akwụkwọ, akụkọ, na dọkịta.” Ọ na-ekwu na Glass-eme ka ha na-eji technology erughị “n'ihi na ha na-eji ya ọzọ rụọ ọrụ nke ọma”. Anyị na-n'ezie n'aka ihe na-eme ka nke ahụ o kwuru, otú ahụ ka anyị ga na-eche na-ahụ ma ọ bụrụ na nne na nna, firefighters, zookeepers, brewmasters, film ụmụ akwụkwọ, akụkọ, na ndị dọkịta bụ ndị mbụ na kwụ n'ahịrị na igba egbe ụbọchị.
Echiche Ụgha 4 – Glass dị njikere maka praịm oge. Google chetaara anyị na nke a bụ a prototype ngwaọrụ na na “n'ọdịnihu, taa prototype nwere ike anya dị ka na-akpa ọchị anyị dị ka na ekwentị mkpanaka site n'etiti afọ 80s.” Emela, Google. Ọ bụghị n'ọdịnihu, ugbu a.
Echiche Ụgha 5: Glass eme ọdịdị ihu ude (na ndị ọzọ na dodgy ihe). Google kwuru ọ na-adịghị. na naa, ọ na-adịghị. Ọbụbeghị.
Echiche Ụgha 6: Glass-ekpuchi gị anya(s). Google si ihuenyo bụ n'ezie n'elu anya aka nri. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbụ pedantic anyị ga-ekwu na ọ bụ a ụzọ ugogbe anya otú N'ezie na-ekpuchi anya, ma anyị na-agaghị.
Echiche Ụgha 7 – Glass bụ nke zuru okè onyunyo ngwaọrụ. Google yiri ka a na-uku atọ ọchị. ọ sịrị, “Ọ bụrụ na mmadụ chọrọ na nzuzo idekọ gị, e nwere ọtụtụ ihe, ka mma ese foto si n'ebe karịrị otu ị na-eyi conspicuously na ihu gị na na ìhè nwuo oge ọ bụla ị na-enye iwu olu, ma ọ bụ pịa bọtịnụ.” Enweghị aghụghọ ọ bụla.
Echiche Ụgha 8 – Glass bụ nanị maka ndị nwere ihe ùgwù iji imeli ya. E nwere asịrị ahụ okokụre ngwaọrụ ga-eri budata obere karịa ugbu $1,500 price. Otú ọ dị Google kwuru ụfọdụ welitere ihe ego ịzụta ya site na Kickstarter na Indiegogo. Kedu, n'ezie? Anyị na-aga na-agbalị ime ka ndị mmadụ ego maka a ọhụrụ ngwa nju oyi maka ọrụ.
Echiche Ụgha 9 – Glass machibidoro… n'ebe nile. Google dọrọ aka ná ntị, “Dị nnọọ iburu n'uche, ga-abụ ọkọlọtọ: Glass nwere ike mmasị ka ọgwụ anya m, otú a na Glass ga-agbanyụrịrị bụ eleghị anya a otutu odi mfe karịa isi ọnwụ ndị mmadụ na-asụ ngọngọ banyere blindly ke a mkpuchi ụlọ.” Nyere na anyị na-ama ama ndị a na-ejide maka yi Glass mgbe ụgbọala na nke onye FBI maka nkiri piracy, anyị nwere a ogologo ụzọ na-aga.
Echiche Ụgha 10 – Glass n'egosi na njedebe nke nzuzo. Google kwuru na ndị mmadụ chere ese foto, video ese foto na cellphones niile gbara ọgwụgwụ nke nzuzo, ma n'eziokwu, na ozugbo ha ghọrọ ihe zuru, na-echegbu onwe ya nwụrụ ala. Nke a ikpeazụ mgbe na-eduga anyị Internet Ihe arụmụka.
Na-ajụ ase na-agba ọsọ a arụmụka a izu na ịrị elu nke Internet Ihe ahụ nke na-powering wearable technology development. Anyị ga-amasị-anụ gị echiche banyere ma Internet Ihe ga-egbu nzuzo, ma ọ bụ ma ọrụ data anakọtara site smart ngwaọrụ ga-erukwa echebe.
isi iyi: na-ajụ ase
24801	0 kwadokwara ọkpụkpọ òkù eziokwu, Google, Google Glass, Indiegogo, Kickstarter, Ekwentị mkpanaka, Project Glass, onyunyo
← Olee astronauts na-adị ndụ diplomatic esemokwu na mbara Nchegbu bu onye-ori →